‘न्याय माग्न जाँदा ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ अभियान चलाउने मुख्यमन्त्रीले बच्चा फा'ल्न भने’ - Sidha News
धनुषाकी निहारीका सिंह उमेरले २० वर्षकी मात्र भइन्। बाबुआमाको कमाइमा सुख खोज्ने बेला काखमा ३ महिनाको छोरा बोकेकी छन्। आमाबुवाले उनलाई तिरस्कार गरेर घरबाट निकाले पनि उनी आमा बन्न पाएकोमा गर्व गर्छिन्।
काखमा भएको बच्चाको मुख हेर्दै आखाँमा खुसीको आँशु निकाल्छिन् र भन्छिन्, ‘मलाई आमा बन्ने सौभाग्य दियौ। तिम्रो के दोष थियो र तिमीलाई मैले गर्भमै मा’र्नु? त्यसैले मैले दुनियाँ छोडेकी छु।’
न्याय माग्दै आइपुगेकी निहारीकाले गत भदौ ५ गते तीजका दिन छोरालाई जन्म दिइन्। उनले त्यस पहिलाका ९ महिना रोएरै बिताइन्। कहिलै कसैको त कहिले कसैको ढोकामा पुगिन्, न्याय माग्न। धनुषामा रहेका स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रहरी, महिला अधिकारकर्मी, संघसंस्था तथा प्रदेश नं. २ को प्रदेश प्रमुखकोसम्म ढोका ढक्ढक्याइन् तर, सबैले उनको गर्भमा रहेको बच्चा फा’ल्ने सुझाव दिए।
उनी ती सबै सुझावको विपक्षीमा उभिइन् र आफ्नो बच्चालाई जन्म दिएरै छोड्ने अठोट गरिन्। अन्ततः माइतीघर छोडिन् र एक्लै खुल्ला आकाशमुनी आइन्। ‘म धनुषामा न्याय नपाएर काठमाडौं आएकी हुँ,’ निहारीका भित्रको संघर्षको ज्वाला अझै निभेको छैन। उनले अझै आफ्नो न्यायको लागि अधिकारकर्मी तथा न्यायलयको ढोका चाहार्दै छिन्।
निहारीका उच्च शिक्षा हासिल गर्न जनकपुरमा बस्थिन्। त्यही बेला उनीसँग एकजना पुरुषको भेटघाट हुन्छ। मोबाइल कम्पनीमा काम गर्छु भन्ने श्रेष्ठ थरका केटासँग निहारीकाको प्रेम सम्बन्ध अघि बढ्छ। कन्या केटी र विवाह नगरेका तर उमेर पुगेका केटासँग भेटघाट र प्रेम सम्बन्ध भएपछि उनी हर्षित हुन्छिन्।
‘मैले त पुरै विश्वास गरेको थिएँ,’ अहिले पनि निहारीकाको विश्वास डगमगाएको छैन। उनीहरुबीच सातै जुनी सँगै जिउने म’र्ने बाचा हुन्छ। निहारीकाले आफ्ना आमा बुवालाई थाहै नदिइ उनीसँग विवाह गर्ने निधो गर्छिन्। श्रेष्ठले पनि उनलाई आफ्नो घर लैजाने, घरमा बस्ने र निहारीकासँगै विवाह गर्ने कुरा गर्छन्।
सम्बन्ध यहीमात्र सीमित रहेन। विवाह गर्ने कुरा भएपछि र घरमा आउने जाने भएपछि निहारीकाले श्रेष्ठलाई मनसँगै तन साटिँन्। जीवन साट्ने अपेक्षा भएपछि तन र मनको कुनै कुरै भएन। उनी अहिले केटामान्छेलाई अलि बढी विश्वास गर्नु भुल हो कि? शशंकित हुन्छिन्।
पेटमा दिन प्रतिदिन प्रेमको प्रतिक कोशेली हुर्किन र संसारमा आउने अपेक्षा गर्न थाल्यो तब श्रेष्ठको मन बदलियो। ‘घरमा लिएर १ महिना राखे।
तर, हरेक दिन उनले मलाई पेटको बच्चा फा’ल्नु पर्छ भन्ने दवाब दिन थाले,’ निहारीकाको सपना बालुवाको घर भयो। क्षणभरमा उनको सपना खरानी भयो। आफ्नो प्रेमीको घरलाई आफ्नो घर भनेर बस्ने उनको भाग्यमा अब श्रेष्ठले शब्दबज्र प्राहार गर्न थाले। श्रेष्ठको शब्द सापटी लिदैँ निहारीकाले भनिन्, ‘कसको पेट बोकीस् मलाई के था?’
श्रेष्ठका यस्ता शब्दहरुले निहारीकाको मन चिरा पर्यो। उनले मन बुझाउँदै श्रेष्ठको परिवारको त साथ पाइएला भनिन्। अपवाद श्रेष्ठको परिवारले पनि छोराकै भाषा प्रयोग गर्न थाले। उनलाई अब त्यो घर असुरक्षित महशुस हुन थाल्यो। कतै मेरो बच्चालाई यो संसार हेर्नबाट बन्चित गरिन्छ कि? निहारीकाको मनमा अनेकौं प्रश्न उठ्न थाले उनी घर छोडेर हिँडिन्।
कर्मघर नहुने भएपछि छोरीका लागि जन्म घर नै हुन्छ। जुन घरमा जन्मेर आफ्नो बाल्यकाल हुर्केको हुन्छ, आफूलाई हिड्न डुल्न सिकाएको आगनी, आफैंले सुसु गरेर गन्हाउने भएपनि बाल्यकाल बिताएका बिस्तराहरु, गाली नै गरेपनि आर्शीवाद हुने आमाका शब्दहरु, छोराछोरीको सफलताको लागि नथाक्ने बुवाका पाइलाहरु, साथीसंगी र अरु आफ्न्त हुने ठाउँमा जाने निर्णय गरिन् निहारीकाले पनि।
त्यो आगनीले उनको स्वागत गर्न सकेन। समाजमा विवाहपूर्व नै गर्भवती भएकी छोरी भनेपछि आमाबुवाको इज्जत गइसकेको थियो। आमा बुवाको नजरमा निहारीकाको मृत्यु भइसकेको थियो। उनले त्यो आगनी टेक्दा जन्म दिने आमाबुवालाई दुःखको पहाडले थिच्यो। उनीहरु आफ्नो आगनीमा विपद् आएको अनुभूति गर्न थाले। पेटमा राक्षस बोकेर छोरी घरमा पाइला टेकेको अनुभूति भयो।
निहारीकाको पेटमा भएको बच्चा मा’र्न चाहन्थे उनीहरु। ‘दुई दिनसम्म खाना पानी पनि दिएनन्,’ निहारीकाले त्यो दिन सम्झिइन्, ‘आमा र ठूलीआमा भएर पेटमा लात्ती हान्न थाल्नु भयो। उहाँहरु मेरो पेटमा भएको बच्चालाई मा’र्न चाहनु हुथ्यो। मलाई पनि गर्भपतन गराउ अनि हामी स्वीकार्छौं भन्न थाल्नु भयो। तर, मैले मेरो बच्चा मा’र्ने आटँ गरिन। यसको के दोष, यसलाई किन मा’र्नु झै लाग्यो।’
निहारीकाले घर छोड्ने निश्चय गरिन्। आफूले जन्मदिने आमाबुवाबाट पनि सहयोग र सपोर्ट नपाएपछि उनी भविष्यको प्रतिक्षा गर्न थालिन्। उनले अठोट गरिन् आफ्नो पेटमा भएको बच्चालाई जन्मदिने। उनी जन्मे र हुर्केको घर पनि छोडिन। बाबुआमा, दिदीहरु र सबैभन्दा सानो भाइलाई पनि छोडिन्।
उनी एक्लिइन्। ‘भोक, भोकै बसेँ, भोकले चक्कर आएर लडेँ’ ‘म उसैको (केटाको) घरछेउमा डेरा गरेर बस्न थालेँ। मलाई केही दिदीहरुले सहयोग गर्छौ भन्नु भएको थियो। र साथीहरुले पनि सहयोग गरे। एक्लै बसेँ।’ आफ्नो इतिवृति सुनाउँदै थिइन् निहारीका। ‘उनीहरुले दैनिक देख्ने गरी बसेँ। र आफ्नो लडाईलाई जारी राखेँ।’ उनी दुवै घरछोडेर डेरा गरी बस्न थालिन्।
अब लडाईका लागि उनी न्यायमूर्तिका ढोकाहरुमा धाउन थालिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पुगिन्। त्यहाँको महिला सेलका असईले उनलाई नै दोषी सावित गर्ने कोशिस गरिन्। ‘महिला सेलको असईले तिमी नै त्यस्तै हौ भन्नु भयो। मलाई भोलि डिएनए चेक हुन्छ पनि भन्नु भयो। र, गर्भ पतन गराउने सल्लाह दिनु भयो।’ डिएनए चेकजाँच भए पनि डर छैन निहारीकालाई। ‘जुनसुकै चेकजाँच गराए पनि हुन्छ।’
अहिले पनि उनी आफ्नो काखमा भएको बच्चाले भए पनि आफूलाई न्याय दिलाउनेमा ढुक्क छन्। ‘मलाई यो बच्चाले नै न्याय दिलाउँछ। म बच्चाको लागि भए पनि जीवित रहनुपर्छ भन्ने सोच्छु र रहन्छु पनि।’ आत्महत्या गर्ने विचार पनि निहारीकाको मनमा आएको थियो। जव उनी एक्लै बस्थिन्, खान थिएन्। भोकै बसेपछि चक्कर आयो र घरको सिँढीमा लडिन्।
‘दुई पटकसम्म म बस्ने घरको सिँढीमा लडेको थिएँ। दुई तला माथिबाट मुनिसम्म पुगेँ। म अस्पताल गएँ। मलाई त हल्का चोटपटक लागेको थियो तर, पेटमा बच्चालाई केही भएको पाइएन। म खुसी भएँ।’ आफूमा आएको आत्मह’त्याकाको सोच मनैबाट निकालिन निहारीकाले। जब उनी दोश्रोपटक सिँढीमा लडेर बच्चा सुरक्षित भएको खबर पाइन्। उनी अहिले पनि त्यो दिनलाई सम्झिन्छन्।
जिल्लामा न्याय नपाएपछि उनलाई काठमाडौंमा पनि महिलाअकिारकर्मी र न्यायलय छ भन्ने सोच जाग्यो। ‘मैले सोचेँ काठमाडौंमा त कमसेकम कोही कसैको प्रभाव र दवामा पर्दैनन् होला। मैले न्याय पाउँछु होला भन्ने अपेक्षा गरेँ र काठमाडौं आएँ।’ उनी न्यायलयले केटाको गल्ती हैन केटीको मात्र गल्ती हो भनिदेवस वा न्याय देवस भन्ने चाहन राख्छिन्। ‘कि त मलाई न्याय दिलाओस्, वा न्यायलयले केटा निर्दोष छ भनिदेओस्, यत्रिमात्र अपेक्षा छ। केटा निर्दोष छ भनेको दिनदेखि मेरो न्याय प्रतिको घिडघिडो हट्नेछ।’